Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Janoary 2017
Azia Atsinanana · Janoary, 2017
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Janoary, 2017
Ny Fiainana Ivelan'ny Asa Ho An'ny Filipino Mpanampy An-trano Ao Hong Kong
Mpanoratra Varsity · Filipina
"Tokony hankafy izany isika fa tsy hipetraka fotsiny [ary ho] malahelo.", hoy Michelle Saluta , mpanampy an-trano iray, momba ny andro tsy hiasany isak'herinandro.
Nanaovan'ny Hong Kongey Fihetsiketsehana Miendrika Selfie ny “Fampirantiana” Mozean'ny Lapa
Taorian'ny dingana tetikasa ara-kolontsaina tsy nangalàna ny hevitry ny vahoaka sy ny fandanian'ny fanjakana vola be tamin'ny fandaharana tantara mitohy tamin'ny fahitalavitra mba hampiroboroboana ny tetikasa, nikarakara fihetsiketsehana madinika tamin'ny alalan'ny selfie ny Hongkongey.
16 Janoary 2017
Tafika Thai Manasa Ankizy Hilalao Fitaovam-piadiana Tena izy, Fiara Mifono Vy ary Angidimby Fitondra Manafika
Mpanoratra Mong Palatino · Thailandy
"[Zarinay] hifanerasera amin'ny miaramila sy fitaovam-piadiana ry zareo. Amin'ny fampifaneraseràna azy ireo, mianatra ny mitia ny miaramila ry zareo ary hatramin'ny faniriana hanao miaramila aza"
Milaza ny Fanadihadiana Fa Tsy Matoky Kokoa ny Governemanta Ireo Tanora Mpiserasera Media Sosialy Ao Hong Kong
Mpanoratra Hong Kong Free Press · Hong Kong (Shina)
Nahita ihany koa ny fikarohana fa na dia eo aza ny hetsika antserasera matetika ataon'ny tanora, zara raha nandray anjara tamin'ny hetsika ara-politika ivelan'ny aterineto ny ankamaroan'izy ireo.
Misioka Ireo Sary Fahiny Nolokoina Tamin'ny Alàlan'ny Tambajotra Neural Ny Mpikaroka Japoney
Afaka mampiasa ny fitaovana hita ao amin'ny tranonkala avokoa ny olona rehetra rehefa hanampy loko amin'ny sary mainty sy fotsy.
Nanokatra Tranonkalam-baovao ho Fiarovana ny Fahalalahan-Gazety ny Mpanao Gazety Zokiolona ao Hong Kong
Mpanoratra inmediahk.net · Hong Kong (Shina)
Amin'ny fotoanan'ny korontana, tsy maintsy manavaka ny tsara sy ny ratsy isika; tsy maintsy mifikitra amin'ny zavatra mitombina isika rehefa misafotofoto ny fiarahamonina; tsy maintsy mihazona ny fizakantena amin'ny fomba matihanina isika ao anatin'ny tafio-drivotra.
15 Janoary 2017
"Ny fanomezana fahefana be loatra ireo manampahefam-panjakana mba hanao fitsarana manokana momba izay heverin'izy ireo ho fandikan-dalàna no fahadisoana lehibe indrindra tamin'ity fanitsiana ny volavolan-dalàna ity."
12 Janoary 2017
Mitarika Ireo Mpisera Haneho Fankasitrahana Ho An'ny Mpiasa Vahiny Ny Praiminisitra Ao Singapaoro
Manindry ireo mpanara-maso ao an-toerana fa mbola tsy misy ao amin'ilay tanàndehibe Aziatika manankarena ny tena politika hiarovana ny zon'ny mpiasa mpifindra monina.
Nanoratra tamin'ny teny Japoney sy Anglisy momba ny olan'ny LGBTQ+ any Japana i Masaki C. Matsumoto. Nanaovan'ny Anime Femisit antsafa amin'ny famariparitana ny LGBTQ ao amin'ny sarimiaina manga sy anime izy.